Isebenza kanjani i-Induction Stripping
Ukwehliswa kwe-induction kuyinqubo eshisayo yokulungiselela indawo.I-generator yokungeniswa ithumela okushintshayo kwamanje ngokusebenzisa ikhoyili yokungeniswa, ekhiqiza insimu ye-electromagnetic. Le nsimu iheha imisinga eguqulwa ibe ukushisa lapho ixhumana nezinto zokuqhuba ezifana nensimbi. Ukushisa kwenziwa ngaphansi kwengubo, okwenza ingubo ikhule ngokushesha. Le ndlela ilungele ukwelapha indawo eyisicaba noma egobile endaweni yomsebenzi futhi ayidingi ukuvalelwa.
Izigaba Ubuchwepheshe Amathegi ukufudumeza ukukhishwa kwe-induction, ukwehliswa kokufakwa kwe-induction, ukufakwa kokufudumeza kokungeniswa, ukukhishwa kwepende lokungeniswa, ukukhipha upende wokungeniswa, lokungeniswa PRP uhlelo, uhlelo lokungeniswa lwe-RPR, ukukhishwa kwe-rust ukukhipha, ukukhipha ukugqwala kwe-induction, ukukhishwa kwe-induction, uhlelo lokuhlubula lokungeniswa, RPR Imeyili kwemikhumbi